नवराज कुँवर काठमाडाैं, १९ मंसिर
सन् १९८४ मा दक्षिण एसियाली खेलकुद महासंघको नामबाट सुरू भएको साग खेलकुदको १३औं संस्करण काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा चलिरहेको छ । अनेकन प्रश्न र संशयका बीच सुरू भएको साग नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रतियोगिता हो । दक्षिण एसियाकै ठूलो प्रतियोगिताको सफल आयोजनासँगै नेपालले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो शान र विश्वास पनि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा सागको आयोजना, व्यवस्थापन र अपेक्षित नतिजालगायत विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालसँग शिलापत्रका लागि गरिएको कुराकानी :
समग्रमा साग कस्तो भइरहेको छ ?
हाम्रो योजना र अपेक्षाअनुसार नै साग भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले सोचेभन्दा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी मिडियाले सकारात्मक ढंगले सागलाई कभर गरेका छन् । नेपाली खेलप्रेमीले उत्साहजनक रूपमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । सरोकार राख्ने निकाय, संघसंगठन र तिनका प्रतिनिधिले उच्च प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले हामीलाई निरन्तर हौसला प्रदान गरिरहेको छ । अहिलेसम्मकै राम्रो र व्यवस्थित प्रतियोगिता भनेर हामीले प्रशंसा पाइरहेका छौं ।
साग सुरू हुनुअघि तपाईंले भन्नुभएको थियो कि नेपालले न्यूनतम ५० स्वर्ण जित्छ । तर, नेपालबाट अपेक्षा गरिएका खेल लगभग सकिएको अवस्था छ । अब ५० स्वर्ण पुग्ने सम्भावना छ त ?
मैले हचुवाको भरमा ५० स्वर्ण जित्ने कुरा गरेको होइन । खेल र खेलाडीको प्राविधिक विश्लेषण तथा हिसाबकिताब गरेरै बोलेको हुँ । हामी ५० स्वर्ण पार गर्छौं भन्ने विश्वास छ ।
हामीसँग ३ सय १७ वटा स्वर्ण छन् । आजसम्म १ सय १० को हाराहारीमा स्वर्णको छिनोफानो भएको छ । यसको अर्थ, अझै २ सय स्वर्ण बाँकी नै छ । मैले त ५० स्वर्णलाई पनि न्यूनतम भनेको छु । २ सयमध्ये अझै धेरै स्वर्ण हाम्रो नाममा हुनेछ ।
हाम्रा लागि सागको सम्झनलायक प्रतियोगिता भनेको आठौं प्रतियोगिता नै हो । त्यतिबेला उसु, तेक्वान्दो, कराते, जुडोबाटै हामीले राम्रो नतिजा हात पार्न सफल भएका थियौं । यसपटक पनि तिनै खेलमा मात्रै राम्रो नतिजा देखिएको छ । अन्य खेलमा त प्रगति भएको देखिएन नि ?
अझै धेरै खेल हुन बाँकी नै छ । हामी महिला, पुरुष फुटबलमा स्वर्ण जित्छौं भन्ने विश्वास छ । उत्कृष्ट खेलेर पनि महिला भलिबलमा हामीले स्वर्ण गुमाउनुपर्‍यो । नेपाली महिला भलिबल टोली हारे पनि स्वदेशी तथा विदेशी दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ । त्यस कारण पपुलर गेममा पनि हाम्रा खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो छ ।
साइक्लिङमा हामीले तीनवटा गोल्ड मेडल ल्याएका छौं । यसअघि साइक्लिङमा गोल्ड मेडल आएको थिएन । ट्रायथोलनमा हामीले सबैभन्दा बढी मेडल जित्यौं । १० हजार मिटर दौडमा पहिलो पटक हामीले स्वर्ण पदक हात पारेका छौं । कमजोर भएको भए गोल्ड मेडल आउँदैन थियो । आठौं सागको रेकर्ड हामीले तोडिसकेका छौं । अब १३औं सागको रेकर्ड १४ सागमा तोड्नेछौं ।
तेक्वान्दोमा आस गरिएका केही खेलाडी पराजित भए । यद्यपि, तेक्वान्दोको नतिजा उत्साहजनक छ । तेक्वान्दोका संघहरूमा विवाद हुँदैन थियो भने नतिजा अझै उत्कृष्ट हुन्थ्यो होला नि ?
म सदस्यसचिव भएर आएलगत्तै खेलसँग सम्बन्धित संघसंगठनहरूमा देखिएको विवाद मिलाउन अग्रसरता लिएँ । कम्तिमा १३औं सागसम्म कुनै पनि गेमको विवाद ननिकाल्न मैले सबै संघका पदाधिकारीलाई भनेको छु । मेरो अनुरोधलाई सबैले मान्नुभयो । उहाँहरू सागलाई सफल बनाउन प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभयो । त्यसैको परिणाम हो अहिले हामीले आठौं सागको रेकर्ड तोडेर अघि बढिरहेका छौं ।
तेक्वान्दोका संघमा देखिएको विवाद पनि करिब मिलिसकेको छ । केही विवाद बाँकी रहेको भए त्यसलाई सागपछि मिलाउन सकिन्छ । साग हाम्रो मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रतियोगिता हो । यो कुरा पदाधिकारीले पनि बुझ्नुभएको छ । त्यसैले सागको तयारी थाल्दादेखि नै तेक्वान्दोको विवादले खेलाडी र उनीहरूको अभ्यासमा कुनै असर पर्न दिएका छैनौं ।
यो नतिजाले खेलका कुनै पनि संघसंगठनका पदाधिकारीहरूलाई मनन गर्न बाध्य बनाएको छ कि विवाद नगर्ने हो भने त हाम्रो नतिजा १४औं सागमा अहिलेको दोब्बर हुन सक्छ ।
मंगलबार सुटिङ स्पर्धामा खेलाडीहरू २० वर्ष पुरानो पेस्तोल लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको देखियो, जबकि विदेशी खेलाडी नयाँ पेस्तोल लिएर आएका थिए । २५ मिटर स्ट्यान्डर्डको पेस्तोलमा नेपालकी सीमा तुलाधर त पेस्तोल नपड्किएर लज्जित नै हुनुपर्‍यो । पुरुषतर्फको २५ मिडर र्‍यापिड फायरमा तीन खेलाडीका लागि एउटा मात्रै हतियार देखियो र बाध्य भएर पाकिस्तानी खेलाडीसँग हतियार मागेर खेल्नुपर्‍यो । यस्तो किन भयो ?
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नयाँ जुत्ता लगाएर जानुपर्‍यो भने खुट्टा दुख्छ नि । यो पक्षलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ । साइकल पनि हाम्रो नयाँ थियो । तर, जो मान्छे जुन साइकल चढिरहेको छ, त्यही प्रयोग गरियो भने सजिलो हुन्छ, यसले नतिजामा फरक पार्छ । टेबुलटेनिसमा हामीले ब्याट दिन नसकेर खेलाडीले आफ्नो ब्याटले खेलेका त होइनन् नि । ब्याडमिन्टनमा हामीले र्‍याकेट दिन नसकेर खेलाडीले आफ्नो र्‍याकेट लिएर खेलेका हुन् त ? उनीहरूलाई जुन सहज हुन्छ, त्यही लिएर खेल्छन् । यो कुरालाई लिएर अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन । हामीले यत्रो ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौं । हाम्रा खेलाडीलाई आवश्यक खेल सामग्री पनि दिन लोभ गर्छौं होला त ?
जारी साग व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै नीतिगत निर्णयको अभाव खट्किएको छ कि ?
त्यस्तो छैन । सरकारले भरपूर साथ नदिएको भए यो सम्भव नै थिएन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू, खेलकुदमन्त्रीज्यूलगायत हाम्रा पदाधिकारी सबैले साथ दिएकै कारण आज हामी गौरवपूर्ण रूपमा साग कमजोरीरहित छ भनिरहेका छौं ।
त्यसो भए १३औं साग साँच्चै कमजोरीरहित ढंगले चलिरहेको छ त ?
हामीले दुई/तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार तयार गरेका छौं । आजै मात्र म केही विदेशी पत्रकारहरूको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ । त्यहाँ भेट भएका पत्रकारहरूले नेपालले यूरोप र अमेरिकाको जस्तै शानदार प्रतियोगिता आयोजना गरेको प्रतिक्रिया दिए । अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो र सफल उनीहरूले भने ।
सेभ द मिसनको बैठकमा पनि झिनामसिना कुराबाहेक उहाँहरूले अरू केही कमजोरी औंल्याउन सक्नुभएको छैन । उहाँहरूले हाम्रो व्यवस्थापनलाई तारिफ नै गर्नुभएको छ ।
वर्ल्ड कप होस् वा ओलम्पिक, शतप्रतिशत चुस्त कतै पनि हुँदैन । जारी साग प्रतियोगितामा पनि सानातिना कुराबाहेक हाम्रो कमजोरी छैन । हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीका कारणले खेलाडीले खेल्न नपाउने, खान नपाउने स्थिति बनेको छैन ।
साग आयोजना गर्ने जिम्मा नेपालले चार वर्षअगाडि पाएको थियो । तर, दुई पटक मिति सारेपछि बल्ल साग आयोजना गर्न सफल भइयो । हतारहतार नभएको हुन्थ्यो भने सानातिना कमजोरी पनि देखिँदैन थियो होला नि !
हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था, खेल क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई हेरेर टिप्पणी गर्नुपर्छ । यो सत्य हो कि हामीलाई खेल पूर्वाधार तयार गर्न अलि समय लाग्यो । तर, यसलाई ढिलाइ भन्न हुँदैन । काम गर्दा लागेको समय हो । यसलाई हतार पनि भन्न हुँदैन किनकि, हामीले तयार गरेका पूर्वाधार सागका लागि मात्रै होइनन् । अब हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गर्नुअघि टाउको कन्याउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छौं ।
केही वर्षअघिसम्म हामी चुनौतीका चाङमा थियौं । ती चुनौती चिरेर हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौं । यसलाई त हामीले उपलब्धि मान्नुपर्छ नि ।
पोखरामा एकातिर खेल भइरहेको छ, अर्कोतिर पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ?
त्यस्तो भएको छैन । क्रिकेट मैदानको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो भने हामीले अहिलेको खेलका लागि अस्थायी मैदान बनाएका हौं । त्यहाँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम बनाउँदैछौं ।
फुटबल स्टेडियचाहिँ हामीले १० हजार सिट क्षमताको निर्माण गर्ने भन्ने सम्झौता गरेका थियौं । १३ हजार सिट लगाइएको छ । बाँकी ७ हजार साग पछाडि लगाइन्छ । जबकि, हाम्रो सम्झौता १० हजार मात्रै थियो । मैले फेरि पनि भनें कि हामीले अहिले तयार गरेका वा गर्दै गरेका पूर्वाधार सागका लागि मात्रै होइनन्, सधैंका लागि हुन् । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा हुँदैछ । ती पूर्वाधार यसका लागि पनि हो ।
खेलाडीहरूको सर्वाङ्गीण विकास र खेल पूर्वाधारको विकासमा राज्य गम्भीर नबनेको कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ ?
त्यस्तो होइन । राज्य खेल र खेलाडीप्रति गम्भीर हुँदैन थियो भने आज साग आयोजना नै हुँदैन थियो । यत्रा पूर्वाधार निर्माण नै हुँदैन थिए ।
निकै सानो मुलुक भुटान र युद्धले थिलथिलो भएको अफगानिस्तानले नेपाललाई खेल पूर्वाधारमा उछिनिसकेका छन् । हामी किन सुस्त त ?
यो पनि सत्य होइन । भुटान र माल्दिभ्सले अहिलेसम्म साग आयोजना गर्न सकेका छैनन् । केही प्रगति भएकै हो तर पनि भुटानको खेल पूर्वाधार हाम्रोभन्दा राम्रो छैन । यो वर्ष मात्रै हामी ९७ वटा पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौं । त्यसबाहेक एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको हिसाबले ३ सयवटा विभिन्न स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आएको थियो । तीमध्ये १ सय ७० वटा निर्माणका क्रममा छौं ।
अहिले जेजति भएको छ, योभन्दा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नु नराम्रो होइन । तर, हामी जहाँको त्यहीँ छौं भन्ने कुराचाहिँ जायज होइन ।
खेलाडीहरूको हकमा राज्यले कुनै प्रतियोगितामा मेडल जित्दा दुई/चार लाख दिनुबाहेक दिर्घकालीन विकासमा ध्यान दिन नसकेको भनिन्छ नि ?
हामीले यो कुरा महसुस गरेका छौं । अब विगतका कमजोरी पहिल्याएर अघि बढ्ने प्रयत्नमा छौं । योभन्दा अगाडि खेलप्रतिको बुझाइ नै अपूरो थियो । प्रशिक्षकले खेलाउने र खेलाडीले खेल्ने मात्रै भनेर बुझिन्थ्यो भने अब हामीले खेलाडीको स्वास्थ्यदेखि जीवनशैलीमा ध्यान दिन थालेका छौं । यसपटक हामीले प्रत्येक हप्ता खेलाडीको मेडिकल चेकअप गरायौं, एन्टीडोपिङ, मेडिकलका बारेमा जानकारी दियौं, मनोविज्ञानका कक्षा सञ्चालन गर्‍यौं । मेडल जितेका तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएका खेलाडीलाई ल्याएर अन्तर्क्रिया गरियो । खेलाडीहरूलाई गीतसंगीतको माध्यमबाट स्ट्रेस फ्रि गराउने प्रयास गर्‍यौं । यो सबै काम खेलाडीहरूको मनोवल उच्च पार्नका लागि गरिएका हुन् ।
किशोर अवस्थादेखि नै खेलाडीको स्वास्थ्यप्रति यसरी नै ध्यान दिने र उच्च प्रविधियुक्त प्रशिक्षण दिने कुरामा चाहिँ कहिले ध्यान पुर्‍याउने ?
सबै कुरा एकै पटक हुँदैन । हामी जुन खालको धरातलबाट आएका छौं र अहिले जहाँ छौं, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि हामी हात बाँधेर कहाँ बसेका छौं र ? कसरी खेल क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, खेलाडीलाई कसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ, कसरी उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिन्छ भन्ने कुराले त हामीलाई पनि झकझकाइरहेको छ नि । यी सबै कुराका लागि समय लाग्छ ।
२०७३ सालमा राखेप र हङकङ स्पोर्ट्स अफ इन्स्टिच्युटसँग खेल क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि आठबुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसको प्रगति के छ ?
उक्त सम्झौता मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । त्यसबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै केही भन्न सकिएला । आगामी दिनमा धेरै खालका सम्झौता गर्ने तयारी छ । कुनै एउटा देशसँग मात्रै म सम्झौता गर्दिनँ ।
जे भए पनि राखेप भनेको खेल क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । नेपालमा स्पोर्ट्स हस्पिटल र युनिभर्सिटीका लागि के गर्नुहुन्छ ?
साग सकिएपछि तीनवटा काम गर्ने मेरो योजना छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जिम हल बनाउने काममा हामी लाग्छौं । दोस्रो, अहिले स्पोर्ट्सको राम्रो हस्पिटल निर्माण गरिएको छ । यसलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न गर्ने तथा खेलाडी, प्रशिक्षक, पूर्वखेलाडी, संघका पदाधिकारी, खेलाडीका परिवारलाई केन्द्रित गरेर यसलाई उत्कृष्ट स्पोर्ट्स हस्पिटलका रूपमा विकास गर्नेछु ।
अहिले स्पोर्ट्सको ट्रिटमेन्टका लागि खेलाडीहरू विदेश जानु पर्दैन । यही सागको सन्दर्भमा पनि मैले थुप्रै उपकरण र औषधि झिकाएको छु । हालै मात्र साग सदस्य सातै राष्ट्रका चिकित्सकहरूले भिजिट गर्नुभयो । उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो, ‘हाम्रो देशको भन्दा तपाईंहरूको देशमा उपचारको राम्रो व्यवस्था रहेछ ।’
तेस्रो, यो वर्षभित्र आफ्नै सञ्चारको च्यानल बनाउँदैछु । रेडियो, टीभी, अनलाइनमार्फत खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलाउनेछौं । जहाँसम्म स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीको कुरा छ, यो तत्काल सम्भव नै नहुने कुरा हो । हामीसँग त्यो पूर्वाधार छैन । मैले विश्वका १५/२० वटा स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी भिजिट गरेको छु ।
हामीसँग पूर्वाधार मात्रै होइन, दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । मेरो अहिलेको प्राथमिकतामा स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी छैन । बरू खेलसम्बन्धी सर्ट टर्म कोर्सहरू गर्न सकिन्छ ।
अहिले दक्षिण एसियामा नेपाली खेलकुदको स्थान के हो ?
हामी दोस्रो स्थानमा छौं । पूर्वाधारको हिसाबले पनि हामी समुन्नत हुँदैछौं र नतिजाको हिसाबले पनि हामी अब्बल नै छौं ।
अबको चार वर्षपछि नेपालको खेल क्षेत्र कुन अवस्थामा हुन्छ ?
यो चार वर्षमा सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार तयार हुन्छन् । खेलाडीहरूको व्यावसायिक विकास हुनेछ । खेल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । खेलभित्र सुशासन, पारदर्शिता हुनेछ । अव्यवस्थित संघहरूलाई म कारबाही गर्नेछु । काम नगर्ने संघहरूलाई म बिदा दिएर काम गर्ने संघहरूलाई ल्याउनेछु । सिंगो खेल क्षेत्रप्रति नेपालीले सम्मान र आकर्षित हुने वातावरण हुनेछ ।
खेलभित्र हुने चरम राजनीतिलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
मेरो एउटा प्रष्ट विचार छ, खेलमा राजनीति हुनु हुँदैन । राजनीतिक समर्थन र प्रोत्साहन चाहिन्छ तर खेलभित्र राजनीति हुन दिन्नँ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, १९ मंसिर २०७६, १२:१६:००
युट्युबरको इजलास, ठाउँको ठाउँ फैसला